Iwu ụgbọ ala mini dump agwụla ma dị njikere maka nnyefe. Ụgbọ ala mkpofu Obere bụ otu usoro mkpofu mmiri na -ewu ewu, naanị n'afọ a, anyị ebupụlarị ihe karịrị otu narị obere ụgbọ ala ndị a na mba dị iche iche. Ezi arụmọrụ, ọnụ ahịa na ọnụ ahịa, yana ọmarịcha ...GỤKWUO »
Ụgbọ ala ụgbọ elu Boom dị n'ụgbọ njem. Crane bụ ụdị igwe a na -ejikarị na ọdụ ụgbọ mmiri, ogbako, ọkụ eletrik na saịtị nrụpụta. The kreenu bụ a n'ozuzu aha hoisting igwe. A na -akpọkarị crane bụ kreenu akpaaka, klọọkụ crawler na crane ụdị. A na -eji crane eme ihe na h ...GỤKWUO »
1. Ejikọtara ihe owuwu ahụ na ụdị onye ọrụ, yana imewe ezi uche nwere ike belata ịdị arọ nke ụgbọ ala n'okpuru ọnọdụ ibu. Ọdịdị ahụ dị mfe ma dabara adaba, mwepu ya dịkwa mma, nke nwere ike belata co ...GỤKWUO »
Ọpụrụiche na ụlọ ọrụ gwongworo ihe karịrị afọ 10, anyị maara ihe ụgbọ ala bụ, yana ihe ndị ahịa chọrọ n'ezie. Anyị nwere oke ọkọnọ dị ka Tractor Truck, Truck Truck, Concrete Mixer Truck, CNG Truck, Cargo Truck, Tank Truck, Truck Truck, All-Wheel Driv ...GỤKWUO »
Ịdabere na arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ọrụ dị elu, usoro a bụ usoro nke isii nke iwu ebupu na Philippines n'afọ a. Ọpụrụiche na ụlọ ọrụ gwongworo ihe karịrị afọ 10, anyị maara ihe ụgbọ ala bụ, yana ihe ndị ahịa chọrọ n'ezie. Anyị nwere r ...GỤKWUO »